किन रुचाइए भिटेनको ‘थाहा छैन’? – " सुलभ खबर "
किन रुचाइए भिटेनको ‘थाहा छैन’?
र्‍यापर भिटेन अहिले युट्युवको ट्रेन्डिङको पहिलो नम्बरमा छन्। उनको नयाँ गीत ‘थाहा छैन’ले युट्युवको शीर्ष स्थान ओगटेको छ।चार दिन अगाडि सार्वजनिक भएको यो गीतले यो समाचार तयार पार्दासम्म ११ लाख ५ सय बढी ‘भ्युज’ पाइसकेको छ।गीतलाई अधिकांश दर्शकले मन पराएका छन्।
केही समयअघि भिटेन गीत गाएकै भरमा प्रहरी हिरासतमा पुगे। तर, आफ्नै पिताको जवानीमा रिहा गरियो। एउटा सर्जकलाई गीत गाएकै भरमा हिरासतमा पुर्‍याउँदा प्रशासनको विरोध चुलियो। भिटेनको साथ बढ्यो।
प्रहरी हिरासतबाट घर फर्केको केही दिनपछि भिटेनले फिल्म ‘सरौतो’को एक प्रचारात्मक गीतमा आवाज दिए। उनको आवाजलाई धेरै दर्शकले साथ थिए।
पुनः उनले आफ्नै नयाँ गीत बजारमा ल्याएका छन्। ‘थाहा छैन’ बोलको उनको गीतलाई पनि यतिबेला दर्शकले साथ दिइरहेका छन्। गीतलाई यो समाचार तयार गर्ने समयमसम्ममा ७५ हजार लाइक पाएको छ भने, १६ सय मात्र ‘डिसलाइक’ पाएको छ।
गीतमा ५ हजार बढी प्रतिक्रिया देख्न सकिन्छ। जहाँ भिटेनको गीतलाई मन पराउने दर्शकको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। भिटेनले गीतमार्फत आफ्नै कथा भनेको अधिकांश दर्शकको बुझाइ छ। यस अर्थमा पनि भिटेन दुई दिनयता युट्युव टे«न्डिङको एक नम्बरमा अटाइरहेका छन्।
छाडा र भद्दा शब्दको प्रयोगबाट चर्चामा आएका भिटेनको हालै सार्वजनिक ‘थाहा छैन’ आफैंमा एक सुन्दर सिर्जना मान्न सकिन्छ। त्यसले पनि भिटेनलाई दर्शकको साथ बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ।